२०७८ सालमा तीन वटा दशैँ - Baikalpikkhabar
२०७८ सालमा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्रशुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ ।
वैशाख ७ गते मङ्गलवार चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेको पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ ।
यसैगरी २०७८ सालको चैत २६ गते शनिवार पनि अर्को चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैँ परेको छ ।
वडादशैँका रूपमा मनाइने आश्विन शुक्ल पक्षको दशैँ आउँदो वर्ष असोज २१ गते बिहीवार घटस्थापना गरेर सुरु हुने भएको छ ।
असोज २७ गते बुधवार महाअष्टमी, असोज २८ गते बिहीवार महानवमी र असोज २९ गते शुक्रवार विजयादशमी पर्व परेको छ ।
कार्तिककृष्ण पक्षमा सुरु भएर शुक्लपक्षमा सकिने तिहार कात्तिक १६ गते मङ्गलवारदेखि सुरु हुनेछ ।
दशैँ र तिहारलाई नेपालमा विशेषरूपमा मनाइन्छ । लक्ष्मीपूजा कात्तिक १८ गते बिहीवार र भाइटीका कात्तिक २० गते शनिवार परेको छ ।
चैत्रशुक्ल र आश्विन शुक्ल पक्षमा पर्ने दशैँलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नेपालीले ठूलो चाडका रूपमा मनाउँछन् ।
शक्तिको आराधना गर्न वर्षमा चार नवरात्रि पर्ने भए पनि चैत्र शुक्ल र आश्विन शुक्लको दशैँलाई नेपालीले महत्त्वका साथ मनाउने गरेको समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा. डा. रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
वर्षमा चार पटक अर्थात् चैत, असार, असोज र पुस महिनाको शुक्ल पक्षमा देवीको आराधना गर्ने नवरात्र पर्छ ।
असार र पुसमा पर्ने नवरात्रमा साधकले साधना गर्ने गरे पनि आमरूपमा मनाउने परम्परा छैन ।
यस वर्ष विसं २०७७ असोजमा मलमास अधिकमास परेकाले विसं २०७८ मा तीन वटा दशैँ परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलबार, १८ फागुन, २०७७, बिहानको ०९:४२ बजे